Bit By Bit - Ethics - 6.7.3 Chee echiche nke nnyocha ụkpụrụ ọma dị ka na-aga n'ihu, ọ bụghị pụrụ iche
Arụrịta ụka banyere ụkpụrụ ọma nke na-elekọta mmadụ nchọpụta na dijitalụ afọ ugboro ugboro na-eme ọnụọgụ abụọ usoro; n'ihi na ihe atụ, mmetụta uche Contagion bụ ma ọ bụghị usoro ziri ezi ma ọ bụ na ọ bụghị usoro ziri ezi. Nke a ọnụọgụ abụọ echiche polarizes ụka, na-egbochi mgbalị ịzụlite-akọrọ norms, na-akwalite nwere ọgụgụ isi ihe umengwụ, na absolves na-eme nnyocha onye nnyocha na-labeled "usoro ziri ezi" ọrụ dịịrị ha ime ihe ethically. Ndị kasị arụpụta mkparịta ụka na-Ahụwo m ndị metụtara nnyocha ụkpụrụ ọma akpali karịrị nke a ọnụọgụ abụọ echiche na-aga n'ihu n'ihu echiche banyere nnyocha ụkpụrụ ọma.
A isi bara nsogbu na ọnụọgụ abụọ echiche nke nnyocha ụkpụrụ ọma bụ na ọ polarizes ụka. Akpọ mmetụta uche Contagion ma ọ bụ Ire, Ties, na Time unethical akpụ ndị a ọmụmụ ọnụ na ezi arụrụala n'ụzọ na ọ bụghị aka. N'ịga n'ebe ọnụọgụ abụọ si eche echiche na polarizing asụsụ bụghị a oku na-aga n'ihi na anyị na-eji muddled asụsụ izochi unethical omume. Kama nke ahụ, a na-aga n'ihu echiche nke ụkpụrụ ọma ga-, m na-eche, iduga akpachara anya karị ma kpọmkwem asụsụ. Ọzọkwa, a na-aga n'ihu echiche nke research ụkpụrụ ọma doo anyị anya na onye ọ bụla-ọbụna na-eme nnyocha na-aru oru nke na-ama na-atụle "usoro ziri ezi" -should-agbalịsi ike ịmepụta otu ọbụna mma usoro ziri ezi nguzozi na ọrụ ha.
A ikpeazụ uru nke a kwagara aga n'ihu echiche bụ na ọ na-agba ume ka ndị nwere ọgụgụ isi umeala n'obi, nke bụ ihe kwesịrị ekwesị na ihu nke siri ike usoro ziri ezi ihe ịma aka. The ajụjụ nke nnyocha ụkpụrụ ọma na dijitalụ afọ na-esi ike, ọ dịghịkwa onye kwesịrị nnọọ obi ike na ya ike ịchọpụta na ezi omume.